Rapid Prototyping Services, Ukukhiqiza okusheshayo - Createproto
UKUphrinta kwe-3D NOKUKHIQISWA KWE-PROTOTYPING ESHESHAYO
Ama-prototypes abalulekile kuzo zonke izinyathelo zenqubo yokuthuthukiswa komkhiqizo. Kungakhathaliseki ukuthi ukuqinisekisa umklamo wakho ngemodeli efana nento yangempela, noma ukwenza ukuhlolwa kwefomu, ukulingana nokusebenza, uzofuna ama-prototypes ahlangabezana nezidingo zakho.
I-Rapid Prototyping ivumela abaklami nonjiniyela ukuthi benze izibuyekezo ezisheshayo nezivamile zemiklamo yabo. Ngenxa yobuchwepheshe obuhlukahlukene obutholakalayo nezinto zokwakha, kumapulasitiki kanye nezinsimbi, ama-prototypes aphrintelwe nge-3D asebenzela kokubili ukuhlola okubonakalayo nokusebenzayo.
Ukukhiqiza Ivolumu Ephansi
Njengoba uqhubeka nohambo lwakho lokuthuthukisa nokuletha umkhiqizo omusha emakethe, unochungechunge lwezinqumo okufanele uzithathe uma kuziwa ekwenzeni i-prototyping - noma ngabe uzokwethula ihadiwe noma umkhiqizo wesoftware, noma inhlanganisela yakho kokubili - udinga ukuba ne-prototype eyenziwe. Ngemva kokubeka ngempumelelo isisekelo senqubo yokuthuthukiswa futhi wakulungiselela amamodeli e-CAD, ufika ekukhetheni okulandelayo. Ngaphambi kokwenza i-prototype yokusungula kwakho udinga ukunquma ukuthi yiluphi uhlobo lwe-prototype ozolwakha. Ukuthi uyazenzela noma uqasha inkampani esheshayo yokulingisa, udinga ukwazi inhloso ye-prototype yakho ezofeza ngoba izosiza ukukhetha izindlela ezifanele, amasu, nezinto zokwakha. Unalokho emqondweni, ake sidlule ezinhlotsheni zama-prototypes nezinjongo zokuwakha.
Yakha iproto. Izinsiza ezisezingeni eliphezulu.
Uma ungeza i-CreateProto ethimbeni lakho, uvuna imiklomelo yeminyaka eyishumi yesipiliyoni esihlanganiswe nolwazi nobungcweti emaphethelweni obuchwepheshe. Le nhlanganisela isivumela ukuthi sinikeze izixazululo ezikhethekile zobunjiniyela kanye nezokukhiqiza ezenziwe ngomthungo sisebenzisa zonke izinhlobo zezinsimbi, amapulasitiki, nezinto zangaphandle, ezihlala zihleliwe futhi ngobuhle ongathembela kubo.
LAISHA INGXENYE XHUMANA NATHI
Ungasebenza Kanjani Nathi
Layisha Ifayela le-CAD
Ukuqala, mane ukhethe inqubo yokukhiqiza bese ulayisha ifayela le-3D CAD.
Singamukela izinhlobo zamafayela ezilandelayo:
> I-SolidWorks (.sldprt)
> I-ProE (.prt)
> ISINYATHELO (.stp)
> I-Parasolid (.x_t noma .x_b)
> .stl amafayela:
Buka Amafayela Amukelwe
Fihla Amafayela Amukelwayo
Ukuhlaziywa Kwedizayini Kwenziwe
Emahoreni ambalwa sizokuthumelela idizayini yokuhlaziywa kwe-manufacturability (DFM) kanye namanani esikhathi sangempela.
Kanye namanani anembile,
isilinganiso sethu esisebenzayo sizobiza noma yikuphi okunzima ukwenza izici ezisekelwe
ohlelweni lokukhiqiza olukhethile. Lokhu kungasukela kokunzima kuye kokwenza isikhunta ngaphansi kwezimbobo ezijulile ezingxenyeni eziwumshini.:
Uma usubuyekeze ikhwothi yakho futhi ufaka i-oda lakho, sizoqala inqubo yokukhiqiza. Siphinde sinikeze izinketho zokuqeda.
Sinikeza izinhlobonhlobo zezinketho zokuqedela kuzo zonke izinsizakalo zokukhiqiza. Lokhu kungasukela ekuqedeni kwejazi eliyimpushana kanye ne-anodizing ukuya ekuhlanganiseni okuyisisekelo kanye nokufaka okufakwe imicu.
> Ukukhiqiza Umthamo Ophansi
> Ukuphrinta kwe-3D:
Inqubo yethu yokukhiqiza yedijithali isivumela ukuthi sikhiqize izingxenye ngokushesha njengezinsuku ezi-3.
Impumelelo Kuzo zonke Izimboni
Bona ukuthi izinkampani ezisungula izinto ezintsha emhlabeni zisebenzisa kanjani ukukhiqizwa kwedijithali ukwenza i-prototyping esheshayo kanye nokukhiqizwa okudingekayo. Sisebenzela uhla olubanzi lwezimboni kusukela kumadivayisi ezokwelapha asindisa ukuphila kuya ezingxenyeni zenjini ye-aerospace.
BUKA IZImboni EZIKHONJWAYO
I-3d Printing & Rapid Prototyping Services, I-Prototyping esheshayo, I-Cnc Prototyping, I-Prototyping Esheshayo Nokukhiqiza, I-Prototyping esheshayo, I-Cnc Rapid Prototyping,